Reolink Argus 3, kamarad ilaalin si cadaalad ah u dhameystiran | Wararka Gadget
Qalabka la gashan karo
Reolink Argus 3, oo ah kamarad ilaalin si cadaalad ah u dhameystiran
Miguel Hernández | 28/05/2021 10:00 | General
Shirkadda Aasiya Dib u fur Wuxuu la shaqeynayay sanado badan hada kamaradahaan amaanka guriga caqliga ku shaqeeya iyo nooc kasta oo fikrad ah oo maskaxda ku soo dhacda. Siidayntiisii ​​ugu dambaysay looma seegi karin websaydhkeenna, halkaasoo aan had iyo jeer kula socodsiino macluumaadka ku saabsan guriga ku xiran.
Nala garo dhamaan awoodaha, faa iidooyinkiisa iyo dabcan sidoo kale qasaarooyinkiisa. Ha seegin falanqayntaan qotoda dheer ee faahfaahsan.
1 Qalabka iyo naqshadeynta
2 Sifooyinka farsamada
3 Dib uga fikir barnaamijka iyo dejimaha
Qalabka iyo naqshadeynta
Reolink waxay go'aansatay inay ku sharraxdo sii wadida sheygan. In kasta oo ay leedahay sheeko cusub oo muhiim ah marka loo eego Argus 2 oo aan sidoo kale halkaan ku falanqeyneyno, xaqiiqadu waxay tahay in shirkaddu ay leedahay naqshad si muuqata loo aqoonsan karo oo dhan alaabteeda. Markan waxaan haynaa qalab leh qayb hore oo fidsan oo leh dabool madow, halka gadaalku uu aad ugu yar yahay balaastig cad oo dhalaalaya. halkaasoo aan ka arki karno astaanta shirkadda. Dhanka dambe, aag magnetized ah oo naga caawin doona inaan u dhigno taageerradeeda badan ee aan gadaal ka hadli doono.
Qiyaasaha: 62 x 90 x 115 mm
Waxay ku taal hore halka ay LED-yadu ku jiraan, inta soo hartay ee dareemayaasha iyo tikniyoolajiyadda u heellan qabashada sawirka. Dhabarka dambe waa meesha aan ku leenahay dekedda microUSB oo u adeegta korontada, saldhigga rakibidda iyo afhayeenka wax warramaya. Waxaan sidoo kale ku leenahay badhanka "dib u dajin" saldhiga sidoo kale badhanka shidida / dabka iyo dekedda kaarka microSD ee aan ka heli karno barnaamijka.
Baabacada, sidaan soo sheegnay, waxaa qaata adabtarada magnetized-ka ah kaas oo noo ogolaanaya inaan kaamirada dhigno xaglo badan anaga oo aan dadaal badan sameynin.
Dareeraha 'Starlight CMOS' ayaa mas'uul ka ah qabashada sawirka, awood u leh inuu bixiyo xallinta 1080p FHD oo leh qiime, haa, oo keliya 15 FPS. Qaabka fiidiyowga ee la duubay wuxuu noqon doonaa mid caalami ah oo iswaafajiya, H.264.
Xaaladdan oo kale kaamiraddu waxay leedahay xagal muuqaal oo ah 120º oo adeegsanaya nidaam aragga habeenkii oo aad u adag madow iyo caddaan illaa lix laydhadh infrared leh oo awood u leh inay arkaan ilaa 10 mitir, iyo sidoo kale nidaam aragti midab leh oo habeen ah laba 230 lm LEDs oo leh dhawaaq ah 6500 K taasi waxay sidoo kale na siin doontaa waxyaabo ilaa 10 mitir fog ah.
Waxaan haynaa lix weyneeyn oo si weyn loogu weyneeyo foomka loo adeegsado arjiga la adeegsaday. Dhinaceeda, waxay leedahay makarafoonka iyo afhayeenka taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan heysano cod labada dhinac ah oo aan u isticmaalno sidii isgaarsiin. Dhinaceeda, waxay leedahay nidaam lagu ogaado "PIR" dhaqaaq lagu ogaado dhaqdhaqaaq leh ilaa 10 mitir xagal 100º ah.
Waxay leedahay isku xirnaanta WiFi ee ka shaqeysa shabakadaha 2,4 GHz oo leh amniga WPA2-PSK. Heer farsamo ahaan iyo qalab ahaanba, tani waa wax walba oo aan ka nidhaahno kamaraddan, oo hal-abuurnimadeeda la xiriirta qaabkii hore ay aad u yar tahay, laakiin ay ku filan tahay inay sii ahaato wax soo saar soo jiidasho leh. Ugu dambeyntiina, kamaradani waxay si buuxda ula jaanqaadi kartaa guriga ku xiran ee Kaaliyaha Google.
Dib uga fikir barnaamijka iyo dejimaha
Codsiga Reolink waa mid si fiican loo shaqeeyay oo wuxuu bixiyaa xiriir wanaagsan oo adeegsade iyo waxqabad wanaagsan labada iOS iyo Android, ugu yaraan tijaabooyinka aan awoodnay inaan fulino:
U soo dejiso macruufka
U soo dejiso Android
Codsigu wuxuu noo oggolaanayaa inaan si toos ah ugu xirno kamaradda tooska ah, labadaba iyada oo loo marayo WiFi iyo xogta moobiilka. Waxaan awoodi karnaa inaan awoodno inta hartay iyo sidoo kale daawashada fiidiyowyada lagu keydiyay kaarka xusuusta. Kuwa kale, kuwani waa awooda ugu xiisaha badan ee arjiga:
Firfircoonida nidaamka ogaanshaha dhaqdhaqaaqa ee kiciya kamaradda kaliya markay ogaato
Soo gal toos ah una toos labada cod iyo muuqaal ee waxa dhacaya
Is dhexgal adoo adeegsanaya afhayeenka codka aan ka soo dejineyno moobilka
Ogeysiiska ogeysiiska dhaqdhaqaaqa
Kaydinta 30-kii ilbiriqsi ee ugu dambeeyay markii laga boodo ogeysiis
Digniinta batteriga oo hooseysa
Qalab duubista, shid iyo demin
Nasiib darrose waa inaan u marnaa codsigeeda nooc kasta oo maareynta kamaradda fiidiyowga ah, Iyada oo ay taasi jirto, xoogga saar qaabka wanaagsan iyo softiweerka la habeeyay ee ay leedahay.
Argus 3-kan 'Reolink' waa tallaabo horay loo qaaday iyadoo kamaradda laga dhigayo mid iswaafaqsan, iyadoo na siineysa suurtagalnimada in la doorto guddi qorraxda ilaaliya oo qalabku had iyo jeer firfircoonaan doono, iyadoo aan loo eegin kharashka batteriga ku jira. Shaki la'aan, beddel aad u xiiso badan oo ah badeecada kala duwan ee 'Reolink' oo si tartiib tartiib ah u koraya, waxaad ka heli kartaa Amazon ka 126 euro.
Qiimeynta xiddiga 4
Dib u eegida: Miguel Hernández
Ku dhejiyay: May 28 ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 23 ee 2021
Xuduudaha kala duwan
Qaadida (cabirka / miisaanka)
Ma jiro adeege isku dhafan
La'aanta FPS badan
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reolink Argus 3, oo ah kamarad ilaalin si cadaalad ah u dhameystiran
Huawei Band 6, waa smartband-ka ugu dhameystiran suuqa [Falanqaynta]
Fire HD 10, kiniiniga Amazon waxaa loo cusboonaysiiyay mid ka awood badan oo dhalaal badan
Hesho wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan tikniyoolajiyada iyo xisaabinta emaylkaaga